Jowhar.com : Somali Leader News - News: Ururka Alshabaab oo weeraray fariisimo ciidamada AMISOM ku leeyihiin degmada Mahaday
April 23 2014 08:53:37
Dagaal socday muddo nus saac ah ayaa dhex maray ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlada Soomaaliya oo isku dhinac ah iyo ciiidamada Alshabaab ee soo weeraray degmada.
Illaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkan iyadoo hugunka rasaasta iyo madaafiicda la is weydaarsanayay laga maqlayay meelo ka fogfog degmada Mahaday.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida ah ee ku saabsan weerarkii xalay lagu soo qaaday degmada Mahaday.
Degmada Mahaday ayaa ah halka ay ugu dambaysa ee ay ciidamada AMISOM ku sugan yihiin marka laga soo tago magaalada Muqdisho, waxana ay la kulmaan ciidamadan dagaalo ku dhufo ka dhaqaaq ah.
Toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ayaa weerar gaadmo ah waxa lagu dilay labo askari oo Soomaali ah kana tirsanaa ciidamada xoogga dalka xilli fiidnimo ah oo ay ku sii jeedeen saldhigga ciidamada ay ku leeyihiin degmada Mahaday.
0 Comments · 2490 Reads
Jowhar.com724,149 unique visits